Faah Faahin Qaraxa ka dhacay isgooyska sayidka ee Magaalada Muqdisho. – Hornafrik Media Network
Faah Faahin Qaraxa ka dhacay isgooyska sayidka ee Magaalada Muqdisho.
Muqdisho-Hornafrik-Qarax loo adeegsaday gaari sida ay walxo qarxa uuna ka xeynayaay naftii halige ayaa abaaro 3:30 Daqiiqo ka dhacay isgoyska Sayidka ee magaalada Muqdisho oo ay deris dhaw la yihiin xarumo muhiim ah sida wasaarada Arimaha gudaha , Tan Amniga ,Xarunta Golaha shacabka ee Baarlamaanka iyo Bar koontarool oo xarumaha aan sheegnay iyo madaxtooyada u ah meel laga ilaaliyo.
Qaraxa ayaa dhacay xilli gaadiid marayay wadada ay saf ugu jireen in la baaro waxaana jirar warar kala duwan oo ku aadan inta qof eek u dhimatay qaraxaasi.
Saraakiil sare oo dhanka amniga oo gaaray gobta uu qaraxa ka dhacay waxaa ay sheegeen in ay ku dhinteen sadex qof waxaase warar madax banana oo aan helnay tirada dhimashada ka dhigayaan 5 qof iyadoo ay ku dhaawacmeen shan kale.
Taliyaha Ciidan ka Booliska Soomaaliyeed Gen Bashiir Cabdi Maxamed oo tagay halka uu qaraxa ka dhacay ayaa warbaahinta u sheegay in qaraxa ay ku dhinteen sadex ruux shan qofna ay ku dhaawacantay.
Eng Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow gudoomiyaha Gobolka banaadir ahna Duqa Muqdisho oo kamid ahaa mas’uuliyiin gaaray isgoyska sayidka qaraxa kadib ayaa tacsi u diray ehelada dadka dhintay , waxaana uu sheegay in ciidamada Amaanka ay ka hortageen qasaaro intan ka badan oo qaraxa laga damacsanaa mid kale na ay maanta fashiliyeen sida uu tilmaamay.
Waa gaarigi labaad oo maanta ku qarxa magaalada Muqdisho inkasta oo goobaha ay ku qarxeyn ay ahayd meelo ay ciidamada Amaanka ka ag dhawyihiin oo gaadiidka lagu baaro.
Waxaa dadka ku xeel dheer arimaha amniga tilmaamayaan in ay muuqato habacsanaan dhanka amniga ah tan iyo markii uu soo if baxay mashquulka ka dashay Mooshinka laga gudbiyay Gudoomiye Jawaari ee Golaha shacabka.
Qarax goor dhaw ka dhacay isgoyska Sayidka ee Muqdisho.